မြန်မာ ရိုဟင်ဂျာ စာကြည့်တိုက်: အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်ဝါဒ စွဲကိုင်ထားဆဲ မျက်ကန်းမျိုးချစ်တွေ
NLD က ကြားဖြတ်ရွေးကောက် ၀င်မယ့်နေရာတွေမှာ မွတ်စလင် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်အများစု ကို နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကဒ် ထုတ်မပေးလို့ ဆိုတဲ့အသံတွေ ညံနေတယ်။ ၂၀၁၅ ဒုတိယလွှတ်တော် သက်တမ်းမှာ အလုံးအရင်း တပ်ချီပြီး အသည်းကြားက မဲတစ်ပြားတွေနဲ့ မွတ်စလင်တိုင်းက NLD ကို မဲပေးမှာ သေချာတာမို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ရေတိုရေရှည် စီမံကိန်း မူဝါဒလမ်း စဉ်ဟောင်းအတိုင်း လ၀ကကို ဘေးတီးပြီး ဘိုနေမြဲ ကျားနေမြဲ နှိပ်ကွပ်ဖို့ ဆော်သြနေဆဲပဲလို့ ဆိုကြတယ်။
နိုင်ငံခြားသားတရုတ်တွေ ငွေပေးပြီး နိုင်ငံသားကဒ် လုပ်နိုင်ပေမယ့်၊ မွတ်စလင်တွေ ကိုတော့ ငွေပေးရင်တောင် နိုင်ငံသားကဒ် ရရှိဖို့ ခက်ခဲနေသတဲ့။ ပြည်တွင်းဖြစ် နိုင်ငံခြားသားလုပ်ဖို့ မဟာစီမံကိန်း နဲ့ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် လုပ်ဆောင်နေကြတယ်။
တကယ်တော့ အာဇာနည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဆရာကြီးဦးရာဇာတ်၊ ဒီဒုတ်ဦးဘချို၊ မန်းဘခိုင်၊ ဦးအောင်သန်း၊ မိုင်းပွန်စော်ဘွားကြီး၊ ရဲဘော်ထွေး၊ ရာဇ၀တ်အုပ်ဦးအုန်းမောင်ဆိုတဲ့ အာဇာနည်တွေထဲမှာ ဆရာကြီးဦးရာဇာတ်၊ ရဲဘော်ထွေးနဲ့ (ဦးအုန်းမောင်? I am not sure. May be he was notaMuslim.) တို့ (သုံးဦး?) ဟာ နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက် အသက်စတေးပေးသွားတဲ့ မွတ်စလင်တွေ ဖြစ်နေတာကို လူသိမှာ သိပ်ကြောက်တယ်။ သမိုင်းကို ပျောက်အောင် ဖျောက်ချင်ကြလို့ မျိုးဆက် သစ်လူငယ်တွေနဲ့ မွတ်စလင် သူရဲကောင်းတွေကို မရင်းနှီးစေချင်တာကြောင့်ပါ။
လွတ်လပ်ရေးရပြီးတော့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရရှစ်က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး ပညာရေး ၀န်ကြီးဖြစ်ခဲ့သလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်မှူးဘရှင်ဟာလဲ မွတ်စလင် ပါ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ဖို့ကိစ္စ ပေါ်ပေါက်တုန်းကလည်း ဗိုလ်ချုပ်က “ပြန်မယ် ကိုဖေခင် လေယာဉ်ပျံစီစဉ်”လို့ ပြောတုန်းက ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ သံအမတ်ကြီး ဦးဖေခင်ဟာလဲ မွတ်စလင်ပါပဲ။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်လတ်၊ သံအမတ်ကြီး ဦးလှမောင်၊ ၀မ်အိုဝမ် ကျော်ဝင်းမောင် လို နိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည်ဆရာခြယ်၊ (Election Commission Chairman)
ဒါ့အပြင် ပြောမယ်ဆိုရင် တောင်သူလယ်သမားခေါင်းဆောင် ဂဠုန်ဆရာစံရဲ့ ညာလက်ရုံးဖြစ်လို့ ကြိုးပေး ခံရသူ ထိုးကွင်းမှင်ကြောင်တွေနဲ့ ဦးဒူးဒူးဟာလဲ မျိုးချစ်မြန်မာမွတ်စလင်ကြီး တစ်ဦးပါပဲ။
ဒီလို နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအပေါ် သစ္စာရှိရှိ မျိုးချစ်စံပြ မြန်မာမွတ်စလင်တွေရဲ့ (လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်) သမိုင်းကို မြေမြှုပ်သဂြုင်္ိဟ်ပစ်ချင်လို့၊ မွတ်စလင်မျိုးဆက်သစ်တွေ ကို နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်နဲ့ ဘေးကျပ်နံကျပ်ဖြစ်အောင် စနစ်တကျ နှိပ်ကွပ်နေတာ ထင်ရှားပါတယ်။
တကယ်တော့ မဆီမဆိုင် လက်ပံသားဓားနဲ့ချိုင်ပြီး ပြင်ပကမ္ဘာက အနှိပ်ကွပ်ခံ မွတ်စလင်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်ပြီး ခေတ်အဆက်ဆက် ပြည်မထဲမှာ မွတ်စလင်သူပုန်ဆိုတာ မရှိခဲ့ပေမဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြပြီး အစိုးရတိုင်းက မြန်မာမွတ်စလင်တွေကို Division Policy နဲ့ ဖိနှိပ်ခွဲခြား အုပ်ချုပ်တာ ခံနေကြရတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဥပဒေရေးဆွဲပြီး နှိပ်ကွပ်ခံနေရတဲ့လူမျိုးက မြန်မာမွတ်စလင်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လုံခြုံရေးနဲ့ သံသယကြွေးကြော်သံတွေကို ရေလဲသုံးပြီး လူ့အခွင့်အရေးကို မဟားဒယား အချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့ သူတွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒုတိယ ကိုယ်းကွယ်မှုဆိုင်ရာ လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်တဲ့ မြန်မာမွတ်စလင်တွေပါ။
မြန်မာမွတ်စလင်တွေက ဒီမိုကရေစီခေတ်ကို တကယ်အမြန်ရောက်မှ တရားမျှတခြင်း၊ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို ရကြမှာမို့ ဒါကိုမဖြစ်မနေ ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မယ့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကို အလုံးအရင်းနဲ့ မဲပေးနိုင်ဖို့ တာစူပြီး ကုန်းရုန်း ကြိုးစားနေချိန်မှာ လတ်တစ်လုံးခြား ဥပဒေတွေ နဲ့ နိုင်ငံသားကဒ်မရအောင် စနစ်တကျ ပိရိစွာနဲ့ လုပ်ကြံ လုပ်ဆောင်နေတာကြောင့် NLD ရေ ကယ်ပါအုံးဆိုတဲ့ အသံတွေ ကြားနေရတယ်။